Shuruudaha adeegga - Wevino.store
1.1 Kama iibin doonno mana gaarsiin doonno aalkolo qof kasta oo, ama umuuqda inuu jiro, kana yar yahay da'da 18 sano. Markaad amreyso waxaad caddaynaysaa inaad ugu yaraan tahay 18 sano jir waxaanan xaq u leenahay inaanan keenin haddii aanan hubin tan.
1.2 Haddii ay dhacdo in badeecad aan la heli karin markii aad dalbaneyso amarkaaga, waan kula soo xiriiri doonnaa si aan kuugu diyaarinno beddelaad, ama qaab kale oo ku saabsan dhammaystirka amarkaaga.
1.3 Dalbashada amar meel kasta oo ka mid ah websaydhkeennu ma aha qandaraas, kaas oo la sameeyo oo keliya markaan aqbalno amarkaaga oo aan ku shaqeyno lacag bixinta.
1.4 Waxaan xaq u leenahay inaan aqbalno amar kasta.
1.5 Dhammaan alaabada waxaa la siiyaa iyadoo la heli karo.
2.1 Amarrada dhammaan walxaha daaqadda keenista ayaa la xaqiijin doonaa inta lagu jiro checkout hawsha. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan ula kulanno waqtigaan si kastaba ha ahaatee ma aqbalno wax masuuliyad ah oo alaabooyinka ku imaan waaya daaqaddan gudaheeda duruufaha jira oo aan u aragno inay ka baxsan yihiin awooddeenna.
2.2 Marka la keenayo alaabada inta badan waxaan u adeegsanaa adeegga gudbinta ee UPS. Warqadani waxay kaliya isku dayi doontaa inay alaab keento seddex jeer ka dib markaa waxaa lagu celin doonaa Bakhaarka Wevino. Marxaladdan ama haddii alaabta nalagu soo celiyo cilad keenis aan sax ahayn ama aan dhammaystirnayn oo aad adigu na siiso waxaan xaq u leenahay inaan ku gudbinno kharashka bixinta.
2.3 Waqtiga safarka ayaa kaladuwan oo kuxiran adeega & meesha loo socdo. Amarada 'Dunida inteeda kale', waqtiyada dirista way kala duwan tahay iyadoo kuxiran goobta.
2.4 Canshuur dhaaf kasta oo ka yimaada deegaanka iyo canshuuraha waxaa mas'uul ka ah macaamilka. Masuul kama noqon karno wixii kharashyo kale oo dheeri ah oo ay naga qaadaan kastamada maxalliga ah. Maamulka kastamka ee deegaankaaga ayaa laga yaabaa inuu u baahdo waraaqo gaar ah, shahaadooyin ama dukumiintiyo kale si loogu oggolaado alaabada. Diyaarinta / soo iibsiga waraaqaha waxaa kaliya mas'uul ka ah macaamilka. Dib-u-dhac kasta oo la xidhiidha ficillada xafiisyada kastamyada maxalliga ah mas'uul kama noqon doono Wevino.store
3.1 Dhammaan qiimaha ku qoran boggan waxay ka kooban yihiin VAT 22%.
3.2 In kasta oo aan isku dayeyno inaan hubino in dhammaan macluumaadka qiimeynta ee degelkan ay sax yihiin, mararka qaarkood qalad ayaa dhici kara & alaabada ayaa laga yaabaa in si qaldan loo qiimeeyo. Haddii aan ogaanno qalad qiimeyn ah, waxaan ku go'aansan doonaa, midkoodna: kula soo xiriiri doonaa & ku weydiin doonaa haddii aad rabto inaad kansasho amarkaaga ama aad ku sii wadato amarka qiimaha saxda ah; ama aan kugula socodsiinno inaan ka noqonnay amarkaaga. Khasab naguma qasbi doono inaan alaab ku keeno qiimo qaldan.
3.3 Waxaan xaq u leenahay inaan hagaajino sicirka, dalabyada, badeecadaha iyo qeexida alaabada ee ku saleysan go'aankeena waqti kasta ka hor intaanan aqbalin dalabkaaga. Halka taariikhda dhammaadka lagu qeexay dalab kasta oo websaydhka ah, waxaa loogu talagalay hage kaliya. Wevino.store wuxuu xaq u leeyahay inuu beddelo qiimaha waqti kasta.
4. Soo Noqoshada
4.1 Waxaan bixin doonaa lacag celin buuxda ama badal khamri kasta oo cilado ah. Tani saameyn kuma yeelanayso xuquuqdaada sharciga ah.
4.2 Waxaan u baahan karnaa dhalooyin khaldan in nalagu soo celiyo. Waxaan kuu diyaarin doonaa tan markii loo baahdo adiga oo kugu habboon.
5.1 Haddii ay dhacdo cabasho fadlan emayl u soo dir support@wevino.store adigoo siinaya faahfaahin inta ugu badan ee aad kari karto. Dhammaan cabashooyinka waxaa lagu aqoonsan doonaa 48 saacadood gudahood waxaadna filan kartaa xallin buuxda oo cabashadaada ah 72 saacadood oo dheeri ah. Waa lagu wargalin doonaa haddii uu jiro dib udhac intaas kabadan. Cabasho kasta waxaa loola dhaqmayaa sidii mid sir ah oo waxaa ka soo qeyb galaya maamule sare.
6. Kahortaga dembiyada
6.1 Ujeeddooyinka kahortagga ama ogaanshaha dembiyada, iyo / ama qabashada ama dacwad ku oogista dembiilayaasha, waxaan la wadaagi karnaa wixii macluumaad ah ee aan ka soo aruurino Booliska, hay'adaha kale ee dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay ama hay'adaha matala sida ku xusan sharciga ku habboon. Macluumaadka loo wadaago qaabkan looma adeegsan doono ujeeddooyin suuq-geyn ah.
7. Faallooyinka, Faallooyinka iyo Nuxurka
7.1 Isticmaalayaasha degelkan waxay soo diri karaan dib u eegis, faallooyin iyo waxyaabo kale. Xaqan waxaa lagu kordhiyay shuruud ah in nuxurku uusan aheyn sharci daro, fisqi, aflagaado, hanjabaad, sumcad xumo, xadgudub ku ah asturnaanta, ku xadgudubka xuquuqda hantida aqooneed, ama hadii kale waxyeelo u geysanayo dhinacyada saddexaad, ama diidmo. Gaar ahaan, waxyaabaha ku jira waa inaysan ku jirin fayrasyada softiweerka, olole siyaasadeed, codsi ganacsi, waraaqo silsilad ah ama waraaqo fara badan.
7.2 Uma adeegsan kartid cinwaan emayl been ah, inaad iska dhigto qof ama hay'ad, ama haddii kale ku marin habaabiso asalka maaddooyinka.
7.3 Waxaan xaq u leenahay, laakiin ma ahan waajib, inaan ka saarno ama aan tafatirno wax kasta oo ka kooban.
7.4 Haddii aad wax soo dirto ama aad soo dirto waxyaabo, haddii aan si kale laguu tilmaamin adiga:
Grant Wevino.store iyo shirkadaha la shaqeeya xuquuq gaar ah oo aan lahayn, boqornimo-xor ah & si buuxda oo aan rukhsad u lahayn inay u adeegsadaan, u soo saaraan, u daabacaan, wax uga beddelaan, ula qabsadaan, u turjuntaan, u qaybiyaan, u abuuraan shaqooyin ka soo jeeda kana soo bandhigaan waxyaabaha noocaas ah adduunka oo dhan. warbaahinta.
Grant Wevino.store & shirkadaha la shaqeeya & shatiyada-hoosaadyadu waxay xaq u leeyihiin inay adeegsadaan magaca aad soo gudbisay ee la xiriira waxyaabaha noocaas ah, haddii ay doortaan.
Oggol in xuquuqda aad kor ku siisay aan laga noqon karin inta lagu jiro muddada ilaalinta xuquuqdaada aqooneed ee aqooneed ee la xiriirta waxyaabahaas iyo waxyaabahaas. Waxaad ogolaatay inaad ka tanaasusho xuquuqdaada in laguu aqoonsado inuu yahay qoraaga nuxurka noocaas ah & xaqa aad u leedahay inaad diiddo daaweynta sharafta leh ee nuxurka noocaas ah.
Waxaad matashaa & dammaanad inaad leedahay ama si kale u maamushaa dhammaan xuquuqda nuxurka aad soo dirtay; in, laga bilaabo taariikhda la soo gudbiyey nuxurka ama maaddada loo soo gudbinayo Wevino.store, nuxurka & maaddadu waa sax; adeegsiga waxyaabaha aad ka kooban tahay iyo waxyaabaha aad keento ma jabineyso siyaasadaha Wevino.store ama tilmaamaha mana dhaawici doono qof ama hay'ad (oo ay ku jiraan in waxyaabaha ku jira ama maaddadu aysan sumcad darro ku ahayn). Waxaad ogolaatay inaad magdhaw ka bixiso Wevino.store & shirkadaha ku midoobay dhamaan sheegashooyinka uu keenay dhinac sadexaad ee ka dhanka ah Wevino.store ama la shaqeeyayaasheeda oo ka dhashay ama la xiriiray jebinta mid ka mid ah damaanadahan.
Dhammaan sawirrada alaabta ee wevino.store waxaa laga soo qaadey kalkaaliyeyaasha caafimaad waxaana loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad. Amarada waa in ay la xiriiraan dhalashada alaabada, laakiin kuma xirna sawirada iyo sawirada maxaa yeelay khilaafyada ayaa soo muuqan kara.
8.1 Marka ugu horeysa fadlan kala xiriir dukaanka emayl, fakis ama taleefan, sida ku cad amarka xaqiijinta amarkaaga iyo bogga internetka.